‘थाह छैन अपराधी वारि वा पारि छ’ प्रहरी भन्छ -‘अनुसन्धान जारी छ ’ « News24 : Premium News Channel
‘थाह छैन अपराधी वारि वा पारि छ’ प्रहरी भन्छ -‘अनुसन्धान जारी छ ’
गुल्मी, २६ माघ । प्रहरी कै आँखा अगाडि विद्यालयबाट निस्केको एउटा विद्यार्थी तिनचार जनाको समुहद्धारा मरणाशन्य हुने गरि कुटिए । विद्यार्थी ढल्छन् । कुट्ने मध्येका केही मान्छेहरु भाग्छन्, त्यो पनि दिन दहडै । घटना जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मी अगाडिको हो ।
गत पुस २४ गते बिहान करिब साढे १० बजेको हो । सदरमुकाम तम्घासको महेन्द्र नमुना माध्यामिक विद्यालय कक्षा ११ को विहानी कक्षा सकेर घर जान लागेका ईस्मा गाउँपालिका ३ दर्लामचौरका १९ वर्षीय माधव पछाई चिदीचौरमा सदरमुकाम कै चार जना युवाहरुबाट मरणाशन्य हुने गरि कुटिएका थिए ।
घटना स्थल जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट करिब ५० मिटरको दुरीमा पर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला अदालत झन् घर आगन जस्तैको दुरीमा पर्दछ । जहाँ प्रहरीको बाक्ला उपस्थिति हुने थाले।
त्यस्तो ठाउँबाट समेत कुटपिटमा संलग्न चार जना मध्ये दुई जना भाग्न सफल हुन्छन भने झन रातको समयमा र दुरदराज गाउँ हुने अपराधका घटनाका अपराधीहरु एकिन भाग्न सफल नहुन ? गत केहि महिना यता यस्तै भई रहेको छ गुल्मीमा । एक पछि अर्को हुँदै अपराधका घटना बढेका छन् । अपराधमा संलग्न भने प्रहरीको नजरमा न वारी न पारी छ । प्रहरीलाई सोध्धा जबाफ सधै एउटै आउने गरेको छ खोजतलास र अनुसन्धान जारी छ ।
एउटा डरलाग्दो हत्या काण्ड घटेको अहिले पाँच महिना भई सक्यो । अपराधीको अत्तो पत्तो छैन । यसबारे प्रहरीसंग जानकारी लिन खोज्दा प्रहरीको जवाफ सधै उहि हो अनुसन्धान जारी छ ।
हत्या घटनाको ५ महिना सम्म पनि अपराधी पत्ता लाग्न नसक्नु तर प्रहरीले सधै एउटै जवाफ अनुसन्धान जारी छ भनिरहन अफ्ठ्यारो नमान्नु गजव कै कुरा छ ।
गत असोज २० गते राति गुल्मीको ईस्मा गाउँपालिका वडा नम्वर ३ , पालुखा घर्तिफाँटका २३ बर्षीय मोतीबहादुर कुवरको वारी छिनुवा स्थित आफ्नै रेष्टुरेन्टमा अज्ञात समुहबाट निर्मम कुटपिटबाट विभत्स हत्या गरियो ।
टाउँको र शरीरमा डरलाग्दा चोटहरु सहित रेष्टुरेन्ट भित्र रगतको पोखरीमा डुबेको अबस्थामा शव प्रहरीले शव बरामद् ग¥यो । अनसन्धानको सुई प्रहरीले मृतकको दाजु र परिवार पक्ष तर्फ लक्षित ग¥यो । शोकाकुल परिवारलाई नै तनाव दियो । तर खास हत्यारा भाग्यो ।
अहिले ५ महिना वित्नै लाग्दा पनि प्रहरीले हत्यारा पत्ता लगाउन नसक्नुले गुल्मीवासी त्रसित र अचम्वित बनेका छन । गत पुष २३ गतेका दिन सदरमुकाम तम्घासमा हेरखोर गर्ने धामी रामप्रसाद श्रेष्ठ र उनकी श्रीमति शान्तिला श्रेष्ठले ईस्मा गाउँपालिका ३ दर्लामचौरका ६४ बर्षीय रामबहादुर कुमाललाई तातो पन्युले डामेर हत्या गरे ।
सदरमुकाममा दशौं बर्ष देखि त्यस्तो क्रियाकलाप चलिरहँदा पनि प्रहरीको ध्यान नपुग्दा मानिसको ज्यान गयो । त्यस अघि पनि धामी झाँक्रीको अन्धबिश्वासमा अरु पनि मानिसहरुको अकालमा ज्यान गएको थियो ।
यहि माघ ३ गते रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्वर १४ पराल्मी रातामाटामा दिन दाहडै अज्ञात ब्यक्तिले भरुवा बन्दुक प्रहार गरि ४७ बर्षीय तुलबहादुर बिकको घटना स्थल मै ज्यान गयो ।
‘त्यस दिन दिउँसो साढे दुई बजेको समयमा श्रीमान श्रीमति अलिपर जंगलमा घाँसा काट्न गएका थियौ–‘मृतककी श्रीमति गिता बिकले भनिन् –‘श्रीमान अलि तल खोल्सामा जानु भएको थियो म माथि नै थिए एक्कासी बन्दुकको आवाज आयो श्रीमान आईया भन्दै चिच्चाएको सुनेर अरुलाई फोन गरेर गुहार मागेकी हुँ ।’
उनमा स्थानीय एक परिवारका सदस्यले बन्दुक हानेर श्रीमानको हत्या गरि दिएको आशंका छ ।
‘केहि महिना अघि ज्यान मार्ने धम्की आएको थियो’– उनले भनिन –‘श्रीमानको हत्या भएको एक हप्ता बित्दा पनि हत्या गर्ने मान्छे पत्ता लाग्न सकेन, हामीले गुहार पाएनौं ।’
त्यस जंगल सहित रेसुङ्गा बन क्षेत्रमा शिकार खेल्न जानेहरुको विगविगी बढेको भन्दै रेसुङ्गा धामिर्क क्षेत्र भौतिक संरचना निर्माण समितिका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद भण्डारीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवि शर्मा र जिल्ला प्रहरी प्रमुख एसपी प्रविन श्रेष्ठको ध्यानकृष्ट गराए ।
सुरक्षाकर्मीको बाग्ले उपस्थिती रहने ठाउँ मै दिनदाहडै मानिसहरु असुरक्षित हुनु, र अन्य हत्या घटनाका अपराधी पक्राउ गर्न नसक्नु लज्जाको विषय भएको भन्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवि शर्मा र प्रहरी प्रमुख एसपी प्रविण श्रेष्ठको ध्यानकृष्ट गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा ( प्रचण्ड नेपाल समुह) गुल्मीका नेता कार्यकर्ता पुगेका थिए ।
‘छिनुवा हत्या काण्ड भएको ५ महिना पुग्दा पनि हत्यारा पत्ता लाग्दैन । प्रहरी कै सामु मानिसहरु निर्घात कुटिन्छ । जंगलमा बन्दुक चल्छन , मान्छे मारिन्छन । सदरमुकाम भित्रै धामीहरुले मान्छे डामेर मार्छन । यस विषयमा नेकपा प्रदेश कमिटी सदस्य बुद्धि जिसीले भने, ‘पछिल्लो चरण सुरक्षा ब्यवस्था कम्जोर भएको पाईए पछि गम्भीर ध्यानकृष्ट गराउन आएका हौं । ’
नेकपा गुल्मीका अर्का नेता गणेश श्रीपाली, हिरा एसीले मालिका गाउँपालिका ७ घमिरको वडा कार्यालय एक बर्ष मै तिन पटक तोडफोड गरि चोरी हुनु , कसैको बारीको केरा काटिनु त्यस्तै केहि दिन अघि ईस्मा गाउँपालिका २ को वडा कार्यालय फोडेर चोरी हुन तर दोषी पत्ता नलाउनुले सुरक्षा ब्यवस्था फितलो भएको प्रति प्रहरी प्रशासनको ध्यान जानु पर्नेमा जोड दिए ।
उता मालिका मदाने गाउँपालिकाको वन क्षेत्रमा चोरी शिकारी गर्न बन्दुक नपड्कने गरेको कुनै दिन र रात नभएको प्रति पनि नेताहरुले ध्यानकृष्ट गराए ।
सो पार्टीका विद्यार्थी नेता राजेन्द्रविक्रम कुँवरले पनि सुरक्षा ब्यवस्था कम्जोर भएकोले प्रशासनको ध्यान जानु पर्नेमा जोड दिए ।
जिल्लामा दर्जानौ स्थानमा निर्वाद रुपमा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन भई रहँदा पनि प्रशासनको ध्यान नगएको, विकास निर्माणको क्षेत्रमा कमिशन तन्त्र मौलाएको लगायतका बिषयमा पनि प्रहरी प्रशानको ध्यान जानु पर्ने नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदम पाण्डेको आग्रह थियो । प्रहरी प्रमुख श्रेष्ठले हत्या घण्टामा संग्लनहरुको खोजि कार्य भई रहेको र डेलिगेशनमा पुगेको टोलीले उठाएका अन्य कुराहरु पनि आफुहरुको ध्यान जाने प्रतिबद्धता जनाए ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी शर्माले पछिल्लो चरण जिल्लामा केहि अनौठा प्रकृतिका घटनाहरु घटेको प्रति चिन्ता जाहेर गर्दै आफुहरु उठाईएका बिषयहरु गम्भीर रहने प्रतिबद्धता जनाईन् । नेता बुद्धिजिसी भन्छन–‘ यी त प्रतिनिधी मुलक घटना मात्रै हुन । कतिपय अन्यायमा परेका घटना प्रहरीमा उजुरी दर्ता गराउन समेत गृहमन्त्रालय गुहार्न पर्ने अवस्था छ । नेता बुद्धि जिसीले भने यी त प्रतिनिधीमुल घटना मात्रै हुन । अपराध बढने अपराधीहरु नसमातिने घटनहरु धेरै छन ।
केहि महिना अघि चन्द्रकोट गाउँपालिकामा ७० लागि भन्दा बढिको क्षति हुने गरि कृषि तथा पशुपालन फर्ममा आगो लगाउनेहरु खोई पत्ता लगाउन सकेको छ रु प्रहरी प्रमुखको उहि जवाफ –‘ हामी गम्भीर छौं । खोजतलास र अनुसन्धान जारि छ ।
कहिले सम्म अनुसन्धान जारी भई रहने हो ? त्यो भने हेर्न बाँकी छ । समग्रमा गुल्मीको सुरक्षा ब्यवस्था केहि महिना यता निकै कमजोर र निरहिता बढ्दो छ । यस प्रति सम्वन्धित पक्षको ध्यान जान जरुरी देखिएको छ ।